प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो क'डा ट्वीट ! सामाजिक संजालमा खैलाबैला -
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै बाबुराम भट्टराईले गरे यस्तो क’डा ट्वीट ! सामाजिक संजालमा खैलाबैला
काठमाडौं । मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जसपाका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले फेरी क’डा प्रतिक्रिया दिएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीमा अल्प’ज्ञान, अ’हंकार र भ’यंकरको क’कटेल देखिएको बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ सुनेपछि भट्टराईले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीमा कमी क’मजोरी स्वीकार्ने र सच्चिने कुनै छाँटकाँट नदेखिएको भट्टराईले बताए । ‘लिपुलेक नक्साको ब्याज भजाएर अ’कंटक कु’शासन चलाउने र देशलाई ब’र्बादीमा लैजाने बुझियो’ उनले टिप्पणी गरे ।